News - ဝက်အူများနှင့်သော့ခလောက်အကြားကွာခြားချက်
သော့နှင့် screw နှစ်ခုအကြားကွဲပြားခြားနားမှုနှစ်ခုရှိသည်။
1. Bolt များသည်အများအားဖြင့်အခွံမာသီးနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ဝက်အူကိုတိုက်ရိုက်ပြည်တွင်းချည်၏ matrix ကိုအပေါ်လွဲချော်သွားတာနိုင်ပါတယ်;
ခေါင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ groove နဲ့ Thread ကိုလည်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ခေါင်းပေါ်တွင် groove များကိုကြီးမားသော screw များနှင့် drill tail wire ကဲ့သို့ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ဥပမာ - စကားလုံး groove၊ cross groove, အတွင်း hexagon စသည်။ အပြင်ဘက် hexagon မှအပ၊
ဂဟေဆော်ခြင်းအားဖြင့်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ဦး ခေါင်းပြင်ပချည်နှင့်အတူ screw နှစ်ခု, တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အခြားတပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းများ screw နှစ်ခုပိုင်;
ဝက်အူချည်သည်သွားများ၊ သစ်သားသွားများ၊ တြိဂံသော့ခတ်သောအံသွားများသည် screw များဖြစ်သည်။
၁။ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါ ၀ င်သည့်စွဲကပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့်ခေါင်းနှင့်ဝက်အူ (ပြင်ပချည်နှင့်ဆလင်ဒါ) ကိုအခွံမာသီးနှင့်ကိုက်ညီစေရန်နှင့်အပေါက်များမှတစ်ဆင့်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းချိတ်ဆက်ရန်။ ဒီဆက်သွယ်မှုကို bolt connection လို့ခေါ်တယ်။ အကယ်၍ အခွံမာသီးကိုမူလီမှဆွဲထုတ်လိုက်လျှင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲခြားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်မူလီဆက်သွယ်မှုသည်ဖြုတ်တပ်နိုင်သည့်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
2. စက်ဝက်အူအဓိကအားအတွင်းပိုင်းချည်အတွက်အပေါက်နှင့်အတူအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်မှတဆင့်အတွက်အပေါက်နှင့်အတူအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအကြားစွဲစေဆက်သွယ်မှုများအတွက်အသုံးပြုသည်။ အကြီးစားလေ့ကျင့်ခန်းချည်သည်အခွံမာကိုက်ညီမှုမလိုအပ်ပါ (ဤဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားကိုဝက်အူဆက်သွယ်မှုဟုခေါ်သည်။ ဖြုတ် ၍လည်း မရနိုင်သောချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အပေါက်နှစ်မျိုးကြားမှအပေါက်နှစ်ခုကြားတွင်တွယ်ကပ်နိုင်သည့်အခွံမာသီးလည်းတပ်ဆင်နိုင်သည်။ နှစ်ခုအစိတ်အပိုင်းများအကြားဆွေမျိုးအနေအထား။
၃။ Self-tapping screws - စက် screw နှစ်ခုနှင့်ဆင်တူသည်။ သို့သော် screw ပေါ်တွင် thread သည် self-tapping screws ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသတ္တုပါးလွှာသောဒြပ်ပေါင်းနှစ်မျိုးကိုတစ်ခုလုံးအဖြစ်ဖြစ်စေရန်ကြိုးနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုသည် အဖွဲ့ဝင်များကိုအပေါက်များကြိုတင်ပြုလုပ်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် screw များ၏မြင့်မားမှုကြောင့်၎င်းတို့သည်အင်္ဂါများ၏အပေါက်များအတွင်းသို့သက်ဆိုင်သောအတွင်းပိုင်းချည်များကိုတိုက်ရိုက်ဖွဲ့စည်းရန်အင်္ဂါများ၏အပေါက်များသို့တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းနိုင်သည်။
4. သစ်သား screw နှစ်ခု: စက်ဝက်အူနှင့်ဆင်တူပေမယ့်ဝက်အူအပေါ်ချည်သတ္တု (သို့မဟုတ်သတ္တုမဟုတ်သော) အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်အတူစွဲစေဘို့သစ်သားအဖွဲ့ဝင် (သို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု) သို့တိုက်ရိုက်ဝက်အူနိုင်သည့်အထူးသစ်သားဝက်အူ၏ဖြစ်ပါသည်။ သစ်သားအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး မှတဆင့်အပေါက်။ ဒီဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားကိုလည်းဖြုတ်နိုင်သည်။